Accueil > Gazetin'ny nosy > Depiote : Sady bado no mpangataka
Tena mazava izao ny raharaha ao amin’ny depiote ao fa tsy misy intsony izay maha solombavambahoaka Malagasy azy ireo fa tsangan’olona sy mpikaraman’ady ary fanetriben’ny firenena izy rehetra ireo. Voaporofo tamin’ny fihaonana nifanaovan’ny governemanta sy ny depiote tamin’ny alakamisy sy zoma 01 sy 02 desambra 2021 teo izany.
Tsy handroso mihitsy Madagasikara raha toa ka mbola ireny zavatra nitranga ireny no fanaon’ny depiote Malagasy ireo. Tsy misy zavatra ataony raha tsy ny mangataka. 100% ny depiote rehetra nandray fitenenana dia nangataka tamin’ny governemanta avokoa. Hatramin’ny filohan’ny antenimierampirenena dia nangataka avokoa. Fa angaha izany no asa sy andraikitrin’ny solombavambahoaka ireo? Toa ireo androrosy avy any Ambohimandroso ireny no fahitana azy mianakavy mandohalika sy mitalaho eo anatrehan’ireo minisitra. Raha toa ka fanaovan-dalàna sy fanarahamaso ny asan’ny governemanta no andraikitrany dia fangatahana no nipoapoka sy naresaka tao amin’ny CCI-Ivato. Tena mahamenatra satria zavatra tsy fahita eran-tany izany.
Tena azo lazaina fa bado tanteraka ireo depiote ireo satria dia vavakafitera tanteraka tamin’ny fandraisana fitenenana nataon’ilay minisitrin’ny raharaham-bahiny Patrick Rajoelina izay tsy mahay teny Malagasy mihitsy. Nataony tamin’ny teny frantsay tanteraka ny fandraisany fitenenana tamin’iny fivoriana iny ka toa ny omby mijery masinina ny depiote rehetra. Tsy nisy na kely aza nahaloa-bava ary tsy nisy afa namaly izany tamin’ny teny frantsay koa na iray aza. Tena izany no antsoina hoe bado.
Ny tena olana lehibe amin’ity raharaha ity dia ny nanendrena ity minisitrin’ny raharaham-bahiny Patrick Rajoelina ity izay taratrin’ny fanjanahantany. Mangalabaraka ny maha Malagasy satria na ny fitenin-drazany aza tsy hainy sy tsy raharahany akory. Ny Amerikanina ao amin’ny “peace corps” izay miasa mandalo eto Madagasikara ao anatin’ny roa taona monja dia mahay teny Malagasy ao anatin’ny telo volana. Izany no minisitra amin’izao fotoana izao izay manimbazimba ny maha Malagasy ka tsy handroso nahoviana ny firenena.